स्वस्थ जीवनका लागि साइकल – Sajha Bisaunee
स्वस्थ जीवनका लागि साइकल
विकेन्द्र ढकाल । ३१ श्रावण २०७७, शनिबार ०६:०७ मा प्रकाशित
दैनिक जीवनयापनका लागि होस् या मनोरञ्जनका लागि, आफन्त भेटघाट होस् अथवा रोजगारीका लागी ‘यात्रा’ मानव जीवनको अत्यावश्यक कार्य हो । अझ किनमेल र अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा हामीले एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँको यात्रा गर्नैपर्ने हुन्छ । आदिमकालमा धर्तीका सबै मानवजाति पैदल यात्रा गर्ने गर्दथे ।
हिन्दूधर्म ग्रन्धलाई आधार मान्ने हो भने भगवानहरूले यात्राका लागि फरक–फरक वाहन प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । जस्तैः मयूर, घोडा, मुसा आदि । कालान्तरमा प्रविधि विकाससँगै यातायातका विभिन्न साधनको विकास हुँदै गयो । जसले गर्दा आजको हाम्रो यात्रा निकै सजिलो, छिटो–छरितो अनि आरामदायी हुँदै गइरहेको छ ।
मानव इतिहासको कायाकल्पमा पांग्राको आविष्कारलाई अर्थपूर्ण संघटना मानिन्छ । साइकल त्यही इतिहासको महŒवपूर्ण कडी हो । कुनै जमानामा यातायातको सबैभन्दा विशिष्ट साधन रहँदै आएको साइकल अचेल भने विश्व बजारीकरण र आधुनिकीकरणसँगै ओझेलमा परेको छ ।
दुईवटा मात्र चक्काको भरमा सन्तुलन गरेर चलाउन सकिने यो सवारीसाधन १८औं शताब्दीमा जर्मन नागरिकले पहिलो पटक प्रचलनमा ल्याइएको खोजकर्ताले दाबी गरेका छन् । सोही दशकको मध्यतिर फ्रान्सेलीहरूले यो दुई चक्के सवारीसाधनलाई ‘साइकल’ भनी नामाकरण गरेका थिए । व्यावसायिक रूपमै साइकलको पहिलो पटक उत्पादन÷आविष्कार गर्ने श्रेय भने जर्मनी नागरिक कार्ल भान ड्राइसलाई जान्छ । प्रायःजसो भागहरू काठबाट बनाइएको उक्त साइकलको तौल २२ किलोग्राम थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९६० को दशकमा साइकलको राजधानी मानिने नेदरल्यान्डमा जब मानिसहरूको जीवनस्तरमा क्रमिक रूपमा सुधार हुन थाल्यो तब मानिसहरूले धमाधम साइकल त्यागेर कार किन्न थाले । साइकलको संख्या घटेसँगै नेदरल्याण्डमा तीन प्रमुख समस्याहरू देखिन थाले। सहरमा मस्तिष्कघात र हृदयघातका बिरामीहरूको संख्या बढ्यो । देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको गतिलो हिस्सा तेल आयातमा खर्च गर्न थाल्यो । अनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको प्रयोगसँगै सुन्दर सहर एकाएक प्रदूषित बन्न थाल्यो । तर नेदरल्यान्ड साँच्चै साइकल युगमा प्रवेश गरेको चाहिँ सन् १९७१ र ७३ का दुई घटनाले नै हुन् । सडक दुर्घटनामा परी एकै वर्षमा चार सय भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भइसकेपश्चात् ‘स्टप चाइल्ड मडर’ अर्थात् बालबालिकाको हत्या बन्द गर भनी स्थानीय जनता प्रदर्शनमा उत्रन थाले । त्यस्तै इजरायललाई युद्धमा सघाएको आरोपमा साउदी अरबले नेदरल्यान्डमाथि नाकाबन्दी लगायो । दिनानुदिन हुने प्रदर्शन र तेलमा भएको नाकाबन्दीले आजित भएका डच प्रधानमन्त्रीले सन् १९७३ मा विशेष सम्बोधनमार्फत आफ्ना जनतालाई जीवनशैली नै परिवर्तन गर्न आह्वान गरे । फलस्वरूप, नेदरल्यान्ड पुनः साइकल सिटीमै रूपान्तरित भयो ।
आजका दिनमा, आठमध्ये सात डच नागरिक साइकल चलाउँछन् । बाइस हजार माइल त साइकल चलाउनकै लागि भनी बनाइएका साइकलपथ रहेका छन् । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले साइकलमै चढेर राजदरबार पुगेको अनि कार्यालय जान–आउन नै साइकल प्रयोग गरेका तस्बिरहरू बेलाबखत भाइरल हुने गरेका छन् । युरोप, अमेरिका लगायत पश्चिमी विश्वमा साइकलको प्रयोग संस्कृतिकै रूपमा विकास भइरहेको छ । त्यहाँ मोटरसाइकल, कार, सार्वजनिक बस र तीव्र गतिका ट्रेनहरूको प्रयोगसँगै दैनिक जीवन र अन्तरबाह्य पर्यटनमा साइकलको उपभोग लोभलाग्दो स्तरमा छ ।
नेपालमा भने साइकलको इतिहास त्यति लामो छैन । सन् १९२५ मा स्थापना भएको पञ्च अष्टनारायण साइकल पसललाई नै नेपालको पहिलो आधिकारिक साइकल बिक्रेता मानिंदै आएको छ । तर त्योभन्दा अघि नै तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा फाट्टफुट्ट साइकल देखा परिसकेको थियो । ती भू–भागमा केही समय अघिसम्म पनि साइकल छटो र मध्यम दूरीको यात्राका लागि एकमात्र यातायातको साधन थियो । तर समयसँगै साइकलको प्रयोगमा धेरै हदसम्म कमी आइसकेको छ । युरोपको साइकल संस्कृतिको प्रभाव भारत हुँदै नेपाल भित्रिएको हो । नेपाली आम नागरिकले साइकलको उपभोग गर्न थालेको सात दशक पार भइसकेको छ, तर यो संस्कृतिको अङ्ग बन्न सकेको छैन ।
नेपालमा पनि साइकल निकै लोकप्रिय सवारीसाधनको रूपमा प्रयोगमा आएको पाइन्छ । विशेषतः तराइ–मधेशका सर्वसाधारणले साइकलको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा सस्तो, शारीरिक परिश्रमद्वारा चलाउन मिल्ने, कुनै प्रकारको इन्धनको आवश्यकता नपर्ने, चालक अनुमति पत्रको आवश्यकता नपर्ने, अन्य
सवारीसाधन जस्तो दर्ता गर्नु नपर्ने आदि कारण पनि साइकल लोकप्रिय बनेको हो । तर विगतमा तराईका गाउँ–सहरको आर्थिक–सांस्कृतिक जीवनको मेरुदण्ड बनेको साइकल अहिले प्रयोगमा कमि आएको छ ।
स्वास्थ्यका लागि साइकल
सन् २०१४ मा प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा हुने कुल मृत्युको ६० प्रतिशत कारण नसर्ने रोगहरू रहेका छन् । त्यसमा पनि मधुमेह, मुटुको रोग, क्यान्सर, दम प्रमुख चुनौती बनिरहेका छन् । अझ परिवर्तित खानपिन र जीवनशैलीका कारण युवावर्ग नै उच्च रक्तचाप र मधुमेहको जोखिममा पर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा साइकलका विभिन्न फाइदाहरूलाई अङ्गिकार गर्दै यसको प्रवद्र्धन गर्नसके अकालमा हुने त्यस्ता मृत्यु केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो कि?
मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारः दैनिक तीस मिनेटको साइकल यात्राले मानिसको स्मरणशक्ति, सोच्न सक्ने र योजना बनाउन सक्ने क्षमतामा व्यापक वृद्धि गराउँछ । साइकलले आत्मविश्वास बढाउँछ । यति मात्र नभएर यदि तपाइँ ‘इन्सोम्निया’ अर्थात् निद्रा नपर्ने समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने पनि साइकल यात्राले त्यसमा धेरै सहयोग पु¥याउने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
मोटोपनको अचुक औषधिः एक घण्टाको साइकल यात्रामा करिब ४ सयदेखि हजार क्यालोरी कार्बोहाइड्रेट नष्ट हुन्छ । यसको अर्थ यदि तपाईं नियमित रूपमा साइकल चलाउनुहुन्छ भने खानपानमा उति साह्रो बन्देज नलगाई पनि आफ्नो तौल घटाउन सकिन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने, उति नै समय हिँड्ने र साइकल चलाउने दुई बीचमा, हिँड्ने मानिसको तुलनामा साइकल चलाउने मानिसले लगभग दुई गुणा ज्यादा क्यालोरी नष्ट गर्न सक्छ । हिँड्दाभन्दा दौडँदा र दौड्दाभन्दा साइकल चलाउँदा चाडो तौल घटाउन सकिन्छ । साइकलको तुलनामा हिँड्दा वा कुद्दा शरीरको अतिरिक्त भार घुँडा र कुर्कुच्चामा पर्ने हुँदा तौल घटाउनका लागि कुद्नु भन्दा साइकिलिङ्ग गर्नु थप फाइदाजनक मानिन्छ । यस्तै साइकिलिङ्ग गर्दा पेटका मांसपेशीमा थप बल पुग्ने हुँदा, घटाउन सबैभन्दा गार्हो मानिने पेटको बोसो सजिलै पग्लन्छ ।
मुटु रोगको जोखिम कम गर्नः सन् २०१८ को ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित सो अध्ययनले सहरी क्षेत्रमा साइकलको प्रयोग व्यापक रूपमा बढाउनु पर्ने कुरा पनि औँल्याइएको छ । साइकल चलाउँदा मटुुको धड्कन र रक्त सञ्चार दुवै सन्तुलनमा रहन्छन् जसले समग्र रक्त प्रणालीलाई नै ठीक राख्न मद्दत पु¥याउँछ ।
स्वस्थ फोक्सोका लागिः साइकलले दुई तरिकाले हाम्रो फोक्सोलाई फाइदा पु¥याउँछ । पहिलो त साइकलका कारण कम हुने वातावरणीय क्षति र प्रदूषणले फोक्सोलाई सफा र स्वस्थ राख्न मदत गर्दछ । भनिन्छ गाडीको प्रयोग छाडेर प्रत्येक दिन दस किलोमिटर मात्रै पनि साइकलमा आवतजावत गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति बराबर एक वर्षमा १५ सय किलो कार्बन उत्सर्जन कम हुनेछ । साइकलको प्रयोगले इन्धनको खपतमा कमी आउनुका साथै धुवाँ, धूलो र प्रदूषण व्यापक रूपमा कम हुनेछ । दोस्रो भनेको साइकल चलाउँदा फोक्सोमा हुने रक्तसञ्चार र श्वासप्रश्वासले पनि यसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पु¥याउँछ ।
जिमको विकल्पः स्वस्थ अनि स्फूर्त रहन साथै फिट देखिनका लागि अहिले ठूलो संख्यामा युवा जमात जिम सेन्टरहरू धाउने गरेका छन् । कुनै कारणवश यदि तपाईं जिम गर्न असमर्थ रहँदै आउनु भएको छ भने त्यसको भरपर्दो विकल्प साइक्लिङ हुनसक्छ ।
साइकलको नियमित प्रयोगले तौल घटाउनुका साथै मांसपेशी र हड्डीको सन्तुलित विकासमा सहयोग गर्छ । विशेषगरी पेडलिङ गर्दा खुट्टामा र ओरालो झर्दा हातमा बल पुग्ने हुदाँ साइकिलिङ्ग गर्दा मांसपेशी कसिलो, साह्रो र मोटो बन्दछ । समग्र रूपमा हड्डीको विकासमा पनि साइकिलिङ्गले टेवा पु¥याउँछ ।
यी बाहेक पनि मस्तिष्कघातमा (स्ट्रोक) कमी आउने, मानिसको ‘न्याभिगेसन स्किल’ अर्थात भूगोललाई बुझ्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने, तार्किक क्षमता बढ्ने, यौन क्षमतामा वृद्धि हुने आदि फाइदाहरूबारे विभिन्न अध्ययनहरू भएका छन् । यसका अलावा पनि अनुसन्धान नभएका साइकलका अनेकौं फाइदाहरू छन् , जसबारे विस्तृत अध्ययन र खोज हुन बाँकी नै छ ।
साइकल यात्राको चुनौती र सम्भावना
हामीमध्ये धेरैलाई अघिल्लो पटक साइकल चढेको सम्झना नै नहुन सक्छ । हामी कसैले सानो केटा–केटी छँदै साइकल चढेका थियांै, कसैले कलेज जाँदा मात्रै चढेको हो । त्यसपछि भने छैन । कतिपयले भने जागिरे जीवन सुरु भएपछि साइकल चढ्न छाडेका छौं । हामी कतिले भने आफ्नो व्यापार–व्यवसाय सुरु भएपछि र अलिक फस्टाएपछि साइकल चढ्न छाड्यौं । यसको निचोड के हो भने जब हामी आर्थिक रूपमा सबल बन्दै जान्छौ, समाजमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउँदै माथिल्लो ओहोदामा पुग्छौ– तब साइकलको प्रयोगलाई ‘अनावश्यक’ भन्न थाल्छौं ।
अधिकांश अभिभावकले साइकल किनेका छौं, तर आफ्नो लागि होइन, आफ्ना बालबालिकाका लागि मात्र । हाम्रा बालबच्चा सानो छँदा खेलौना साइकल, अलि ठूला भएपछि तीनचक्के साइकल, अझ केही ठूला भएपछि दुई चक्के साइकल घरमा राख्ने बाध्यता झैं हुन्छ । तर, जब हाम्रा छोराछोरी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा पुग्छन्, तब ती साइकल प्रयोगविहीन हुन् थाल्छन् । हाम्रो समाजमा संस्कार नै यसरी बिकसित भएको छ कि ठूलो भएपछि साइकल चढ्ने होइन अथवा आफूसँग केही पैसा कमाई भएको छ भने साइकल चढ्ने होइन ।
‘अफिसमा जागिर खान जाँदा कसरी साइकलमा जाने ? बाटोमा साथीभाइले देखेमा के भन्लान ?’ यस्तै सोच र धारणाका बीचमा हराइरहेको छ, हाम्रो–साइकल संस्कार । निश्चय नै लामो दूरी साइकलमा तय गर्न कठिन हुन्छ । समयको हिसाबले पनि साइकल यात्रा अलि बढी समय लाग्ने नै हुन्छ । अन्य सवारी साधनजस्तो छिटो–छरितो नभए पनि छोटो दूरीको यात्रा तय गर्दा वा ४/५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र यात्रा गर्नुपर्दा हामीले साइकलको प्रयोग बढाउन सके यसले वातावरण र हाम्रो स्वास्थ्यमा ठूलो सकारात्मक असर ल्याउन सक्छ ।
साइकल चढ्नुका फाइदा मात्रै छन्, हानी एउटै छैन । यो सस्तो त छँदै छ, स्वास्थ्यवद्र्धक पनि छ । नियमित साइकल चालकको शरीर स्वतः तन्दुरुस्त हुन्छ । जिम र एरोबिक्समा अतिरिक्त पैसा खर्चिनुपर्दैन । पेट्रोल र डिजेलको खर्च जोगिन्छ । त्यसबाट हुने प्रदूषणको कारक हुनुपरेन । पार्किङ्ग गर्न पनि सजिलो छ । मर्मत खर्च कारको तुलनामा बीसौं गुणा कम लाग्छ । साइकल यसै पनि सामाजिक सवारी हो । साइकल चढ्न थालेपछि मोटरसाइकल र कारसँगै हुत्तिएर कुदिरहँदा छुटेको सामाजिक सम्बन्धको तन्तु फेरि जोडिन थाल्छ । साइकल सवारीलाई अभिन्न जीवनशैलीका रूपमा लोकप्रिय बनाउन यति कारण पर्याप्त छन् ।
हामी पुनः एकपटक हाम्रो धुलोले ढाँकिएको र खिया लागेको साइकल घरको कुनाबाट निकालांै, सफा गरौं, हावा भरौं र चलाऔं । साइकलको माध्यमले स्वास्थ्यको अनि हाम्रो वातावरणको सुधार गर्न मद्दत गरौं । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा ‘ठूलो भएपछि साइकल चलाउन छाड्नुपर्छ’ भन्ने संस्कार विकसित भइरहेको यो समयमा त्यसलाई गलत सावित गरौं र साइकल संस्कारको विकास गरौं । साइकल चढ्न सुुरु गरेपछि मात्र यसका कठिनाइहरू, अलग साइकल लेन, साइकल सुरक्षा जस्ता विषयमा छलफल सुरु गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले साइकल रहर मात्रै हैन यसले सहर विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सार्वजनिक, निजी सवारी र मोटरसाइकलले सडक क्षेत्र ओगट्दा साइकलयात्रीलाई चुनौती छ । त्यसमाथि बस, टेम्पो, मोटरसाइकलजस्ता सवारीले पेल्ने गर्छन्, विविध चुनौती स्विकार्दै हामी अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । सडकमा अन्य यातायातका साधनको अधिकार जति छ, त्यति नै अधिकार साइकलको हुनुपर्छ । साइकलयात्रीका लागि अलग्गै लेनको व्यवस्था हुनुपर्छ । साइकलयात्रीले प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणमा योगदान गरेका छन् । व्यक्तिको फिटनेस र स्वास्थ्यका लागि साइकलको महत्व ठुलो छ । तर, हाम्रो समाजमा साइकलयात्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । साइकल चढ्नेलाई हाम्रो समाजले आर्थिक हैसियतविहीन र निरीह ठान्छ । यो विडम्बना हो ।
साइकल सीटीका लागि हामीले सडकमा समान अधिकार माग गर्नु पर्दछ । अभियानको अर्थ साइकल मात्रै चढ्नुपर्छ भन्ने होइन । सडक साइकलमैत्री हुनुपर्छ, साइकलयात्री सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो । सवारीले प्रदूषण फैलाइरहेका छन् । प्रदूषणमुक्त सहर बनाउन साइकलको प्रयोग बढाउनुको विकल्प छैन । इन्धनको खपत कम हुन्छ र प्रदूषण घट्छ, आर्थिक फाइदा बढ्छ । नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रन्छ । साइकलयात्राका यस्ता धेरै फाइदा छन् ।
पुष्कर शाहले शान्तिको सन्देश बोकी साइकलमै विश्व भ्रमण गरे । जम्मा तीन वटा साइकल, दुई सय सत्तरी वटा टायर, एक सय पन्चानब्बे वटा ट्यूब, एक सय चालीस वटा चेन, छब्बीस जोडी प्याडल, चौध वटा हेल्मेट र त्रिपन्न जोडी पन्जा फेरेरै भए पनि उनले विश्व भ्रमण गरिछाडे । हामीले त यो भन्दा साह्रै सानो सोचेका छौँ । मात्र केही सय युवालाई साइकलप्रति आकर्षित गर्न सकियो भने पनि देशमा दिनानुदिन बढ्दै गएको दीर्घरोग त्यही सयको हाराहारीमा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । झन् भविष्यमा प्रमुख सहरहरूलाई नै साइकल सिटी बनाउन सकियो भने ‘सफा, सुन्दर र स्वस्थ’ नेपाल बनाउने सबैको चाहना पनि पूरा हुनेछ ।
(लेखक बुलबुले साइकिलिङ्ग ग्रुप, सुर्खेतसँग आवद्ध छन् ।)